TTSweet: အလုပ်ထဲမှ အမှားများ
Posted by T T Sweet at 1:31 PM
ကိုဇော် October 10, 2011 at 1:54 PM
ဟင်း . . .အတွေ့အကြုံ . . အတွေ့အကြုံ. . .
Vista October 10, 2011 at 4:02 PM
တီဆွိ အော်ဇီမှလည်း အလုပ်လုပ်ပါအုံး အရည်အချင်းတွေ နှမြောစာကောင်းတယ်
susu October 10, 2011 at 4:10 PM
Sonata Cantata October 10, 2011 at 4:21 PM
တို့များတုန်းကလည်း Sales နဲ့ Service ကြား ဓားစာခံကြီး လုံးလုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ...။ စိတ်နာလို့ အလုပ်ထွက်ပြီး... Sonata Cantata ဘလော့ဂ် ထောင်ပလိုက်တယ် မှတ်ကရော... :)
မြသွေးနီ October 10, 2011 at 4:58 PM
အဲ့ဒီလို စိတ်တိုတာမျိုးတော့ တိုထိုက်တယ်..။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရတာ အရမ်းအာရုံနောက်တယ်။
အစ်မဆွိကို အိမ်ရှင်မထင်နေတာ.. အခုလို သိလိုက်ရတော့ အလုပ်တဘက်နဲ့ စာတွေ ရေးနိုင်တာ.. အိမ်ရှင်မပီသတာ သဘောကျမိတယ်..။ :)
T T Sweet October 10, 2011 at 6:19 PM
မြသွေးရေ အလုပ်က ထွက်လိုက်ပြီလေ။ အရင်က စလုံးမှာတော့ ၁၀နှစ်လောက် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရှင်မပီသတယ်ဆိုတာတော့ ထင်သလောက် မဟုတ်ပါဘူးဂျာ။ အပြင်ကလူတွေသိရင် ရယ်နေဦးမယ်။
မသီတာကတော့ ရယ်ရတယ်။ အစ်မလိုပဲ ခုတော့ TTSweet မှာ စာတွေရေးနေတယ်လေ။ ပေါက်ကရ အစုံပဲ။ ဘယ်ရမလဲ ဟဲ .ဟဲး)
စုစုရေ Retrench လုပ်တော့ သူလဲ ပါသွားတယ်။ အလုပ်ကိစ္စအပြင် အပြင်မှာတော့ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ဆိုတော့ သူပြုတ်တော့လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါပဲ။ ဟို "အန်တီဆွိနှင့် Recession phobias " ဆိုတဲ့ ထဲမှာ သူ့အကြောင်းတောင် တစွန်းတစပါသေးတယ်လေ။ "သူ့အလုပ်ကို serious ထားလွန်းရာ၊ တခြားဋ္ဌာနမှ လူများနှင့်မကြာခဏ ပြသနာတက်တတ်ပါသည်။ ယခုသူ့နာမည် စာရင်းထဲပါရာ သူသည် မယုံနိူင်အောင်ဖြစ်နေသည်။" ဆိုတာ သူ့ကို ပြောတာပါ။
ဗစ်စတာ သမီးတစ်ဖက်နဲ့ အလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားနေတယ်။ သမီးကို daycare (after school)ပို့လို့ရရင်တော့ ပတ်တိုင်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်မလား စဉ်းစားနေတယ်။ အလုပ်ကတော့ အဲလို stress များတဲ့ အလုပ်တွေ မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ အတွေ့အကြုံတွေတော့ နှမြောပါတယ်။ စဉ်းစားနေပါတယ်။
ကိုဇော်၊ အနောနိမတ်စ် ကျေးဇူး။ လုပ်သက် ၁၀နှစ်ကျော်အတွင်း အတွေ့အကြုံတွေ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဖတ်ချင်တယ်ဆို ဆက်ရှယ်ချင်ပါသေးတယ်။ အန်တီဆွိကတော့ ဇွတ် ပဲနော်...း)
PhyoPhyo October 10, 2011 at 6:36 PM
အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေ ထပ်မျှပါဦး ဖတ်ချင်တယ်။
Ever waiting for sharing your experience post and
the most morden post of Ma Thida :D....I like her last sentence.I can't say even like that after quitting my job long time ago.Just labeled eain shin ma and tha myar shin:(
mstint October 10, 2011 at 9:17 PM
စွိတီရေ ငွေပေးပြီးဝယ်လို့မရတဲ့ အတွေ့အကြုံရဲ့ တန်ဘိုးကို အလုပ်လုပ်သူတိုင်း နားလည်လာကြတယ်နော်။
အလုပ်ထဲမှာ အမှားနဲ့ကင်းတဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲလေ။
ကြည်မြန်မာ October 10, 2011 at 11:59 PM
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် မလျှော့ချင်တဲ့စိတ်..နဲ့ မစံပယ်လည်း အလုပ်ထဲမှာ လူတွေနဲ့ အဆင်မှပြေပါ့မလား မသိဘူး ခညာ..။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 11, 2011 at 12:37 AM
လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံကတော့ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင် ပါဘဲနော်။
လုပ်ငန်းသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ တွဲခေါ်သူလဲရှိရဲ့ ဆီးကန်သူလည်းရှိရဲ့
ဒါတွေကို သင်္ခန်းစာယူပြီး ကိုယ့်အလှည့်မှာ သူများကို ခြေထိုးမခံဖို့ လက်တွဲခေါ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာနော်
မဆွိတီရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
သက်ဝေ October 11, 2011 at 2:33 AM
အလုပ်ထဲမှာတော့ စွာနိုင်မှ တော်ရုံကျတယ်... :D :D
စွာတာတွေ အိမ်အထိ ပါ ပါလာလို့ကိုကြီးကတော့ တဖြည်းဖြည်း အပြောဆိုးလာတယ် လို့ပြောတာပဲ... :D :D
sosegado October 11, 2011 at 2:38 PM
‘ကိုယ့်အထက်အရာရှိကို ပြောရမှာကိုလည်း မပြောခဲ့ဘူး။’
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင်ဖြစ်စေ မှားတယ်ထင်ရင်ဖြစ်စေ သတင်းပို့ထားတာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်၊
Legal ကိစ္စဝင်လာရင် အကာအကွယ်လည်းပေးပါတယ်။
မြစ်ကျိုးအင်း October 12, 2011 at 1:49 AM
အလုပ်တွေတိုင်းရဲ့ ရိုးမသွားနိင်မယ့် ပြဿနာတွေပေါ့။
နာမည်လိုချင်လို့ အပေါ်ယံနှမ်းဖြူးတဲ့သူတွေကို သိပ်အမြင်ကပ်သဗျာ။
San San Htun October 17, 2011 at 3:12 PM
တီတီဆွိ အလုပ်အကြောင်းတွေ ထပ်ရေးပါဦးဗျို့..ဗဟုသုတ တိုးတယ်...
Wunna's blog October 18, 2011 at 7:11 PM
တတိယက ကိုယ့်အပြစ်။ QE က အခုလို ကိုယ့်ကို ကျော်ပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်နေတာကို သေချာမတားနိူင်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်မနိူင်ရင် ကိုယ့်အထက်အရာရှိကို ပြောရမှာကိုလည်း မပြောခဲ့ဘူး။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်တို့ဋ္ဌာနက လူတွေရဲ့ စကားစစ်ထိုးရာမှာ ချက်ကျကျနဲ့ နိူင်အောင် ပြန်မပြောနိူင်တာ။ ထစ်ကနဲရှိ စိတ်ကို မထိမ်းနိူင်ခဲ့ပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှင်းပြပဲနဲ့ စိတ်တွေတိုနေခဲ့ကြတဲ့ အပြစ်တွေ
I think most of the Burmese have this issue of solving problems including me
(အဲဒီ product လေး lounge လုပ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။)
Is it launched ???
T T Sweet October 20, 2011 at 1:31 PM
yes, u are right. Thanks for correction.
Soe Yu Nwe October 24, 2011 at 12:09 AM
အတွေ့အကြုံ များ မျော်လင့် နေပါသေး သည် မမဆွိ
i like your sharing experiences